Indlela Izikhangibavakashi Eco Friendly Ngo 2020? | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela > Indlela Izikhangibavakashi Eco Friendly Ngo 2020?
(Kugcine ukubuyekezwa On: 22/05/2021)
Eco travel friendly kuyinto iyahola izingqondo zethu njengoba singena kule eyishumi entsha. Nge izishoshovu zezemvelo ezifana Robert Swan futhi Greta Thunberg, umyalezo izwe athunyelwa nge crystal ukuzwakala. Thina liphelelwa isikhathi negalelo okuhlala njalo emhlabeni futhi ukuvikelwa kwezindawo wakhe oyigugu.
Guqula iqala namuhla futhi nathi, izinqumo esizenzayo ekhuthaza ezokuvakasha wemfanelo. Njengoba siba baqaphela ngokwengeziwe ukuthi imiphumela esinawo endaweni esizungezile kanye travel esimeme imizamo, sisalokhu bacabange ukuthi eco travel friendly e kakhulu ezibanzi umuzwa. travel Zibe Abantu Abadala Abavuthiwe kungekho into isikhathi eside singakhetha badle lapha nalaphaya. Kuyinto into idinga ukuba eyinkimbinkimbi kuxhumene ekuphileni kwethu kwansuku zonke, ekubeni yizenzo.
Lokhu kuthambekela omuhle wenza amagagasi okuqhubekayo kulo lonke embonini yezokuvakasha global. Izikhangibavakashi izikhungo Wethula i amandla elanga, amanzi kabusha izinhlelo ziye lwenteke ukunciphisa ukusetshenziswa futhi plastic sekuba ukusetshenziswa ngokulwa yesikhathi esidlule. Kukhona ukunyakaza ngokujulile global kuyanda futhi lowo, ithemba nokuzimisela, kuyozwakala kahle nezizukulwane ezizayo lezihambi ezinganeliseki. Nawa amathiphu ethu phezulu ku Indlela Izikhangibavakashi Eco ezinobudlelwano:
Isithuthi somzila Is The Eco Friendly Way Izikhangibavakashi. This sihloko eyabhalwa sokuba umuntu afunde izindlela zemininingwane Hamba nge- Londoloza Isitimela, I Eshibhe zemininingwane Amathikithi Iwebhusayithi In The World.
abahambi Abaningi baye bakhetha ukunciphisa carbon wabo lokungcolisa ngokushayela indiza kancane noma ngokunciphisa indiza travel ngokuphelele, ogxile eziphendula buzzword Swedish Izindiza Shame (indiza amahloni). Akuyona imfihlo ukuthi ukuhamba ngendiza manje sekungomunye wabanikela ngesivinini esikhulu ekuguqukeni kwesimo sezulu. Nakuba ezindizayo uyohlale umdlali obalulekile kanjani sikhetha ukuhamba, sidinga akhunjuzwe ukuthi nezinye izinhlobo ukuhamba sipho ukuthusa eco amaholide.
Izincwajana zemininingwane travel has a nostalgic esidlule umusa wokuzungeza nokuhlobisa elinamandla travel eco-friendly isinyathelo. It unikeza uhla izinzuzo kuhlanganise legroom ngaphezulu, udla imoto yokudlela bejabulela nezindawo ezinhle, ukuhamba nezingane kulula futhi kude labo abafuna ukuhlala exhunyiwe, ayikho imodi yokundiza. Izincwajana zemininingwane travel lilinganisa ngokungananazi ukuthi travel wemfanelo.
Yiba Eco ezinobudlelwano, Shiya imfihlo kuphela
Okhunye thina travel, kufanele siyishiyele izinyathelo kuphela. Njengoba eco abahambi, esikwaziyo kakade lokhu. Nokho, nalezi Amathrendi baphokophelele ukuba senze okwengeziwe, Uma kunjalo singase sithathe lesi sinyathelo eminye. Into omuhle kakhulu ukubona kuyinto abahambi Asibambaneni futhi kusale uya khona kangcono kunathi wakuthola. Kudingeka lutho eyolanda izingcezu ezimbalwa udoti ukuthi sibona ogwini noma ehlathini. Ngaphezu kwalokho, kokulahla kahle kusho ukuthi awusebenzi umhlaba phezulu nolwandle.
Phanga phuza Local
Ukusekela abantu bendawo akuyona nje i- eco travel friendly isinyathelo kodwa liphinde umnikelo womphakathi okukhulisa. Ukuthenga bangakini kusho ukuthi akekho owaba ukuthutha lezo. Futhi na ngaphezulu, amabhizinisi endawo nethuba vuma. Kuyindlela yokwehlisa ikhabhoni futhi umphakathi wendawo unqobe.
Yiba yingxenye Eco Friendly Ingxoxo
A mkhuba siba mkhuba ngoba kuyingcenye ingxoxo global. Njengoba i-eco isihambi uzibophezele eco travel friendly izimiso, sidinga ukuthi bahlanganyele futhi ube yingxenye ukuthi lelandzisako. amazwi ethu abe namandla. Njengoba thina ukuxhumana abahambi nabo futhi njengoba sihamba ukuba emakhoneni eziyingqayizivele wonke. Sidinga ukugcina ekusakazeni isigijimi. Siphila nomunye ngesibonelo futhi njengoba senza lezi izinguquko ezidingekile ekuphileni kwethu nokuthi siba nesandla ezokuvakasha esimeme, sigqugquzele abanye ukuba benze okufanayo.
Sebenzisa Yomphakathi Ezokuthutha Noma Hamba
Nakuba kungase kubonakale sengathi okungakhangi ekuqaleni bese ucwaninga ukuthi kumele kwenziwe mayelana ukuphepha ezokuthutha zomphakathi nezindawo, mass zokuthutha umphakathi kuyinto eco friendly indlela travel emhlabeni. Lisebenzisa lemali wancipha uphethiloli umgibeli ngamunye kuqhathaniswa imoto.
Futhi indawo beckons isihambi shí zonke ukuthi kufanele sipho. Kukhona ngempela ayikho indlela engcono uxhumane nabantu bayo, ukuzwa isiko layo, futhi sithokoze ngemvelo ezungezile. Ukuthatha ezokuthutha zomphakathi iyilokho nokuhamba kuyinto ehlukile kangcono ngisho.
Iphakethe Khanyisa Futhi Eco ezinobudlelwano
It akulona iqiniso elikhulu ukuthi nokupakisha ukukhanya kuyinto abangelutho. Akungabazeki Ukupakisha ukukhanya kuyinto eco friendly travel isimiso singakwazi zonke kalula zamukele futhi kunomthelela omkhulu. I ukuxegiselwa thina iphakethe, le esithe ukuba lula izindlela zethu yezokuthutha ngeke nesisindo futhi lokhu uhumusha kancane petrol.
Enye indlela ukudlala ekukhuthazeleni travel esimeme iwukuba bheka ikhithi travel. An eco friendly travel ikhithi sizofaka cishe isixubho bamboo, imishayo yemoto, namabha ensipho esikhundleni sama-gels eshawa. Ama-shampoos amancane nama-conditioners kanye nama-tumbler wokuphinda asebenzise kabusha. Aluminum water bottles are vital as well as metal straw.
I enkulu travel ezijwayele ukwenzeka 2020 ibonisa ukuthi travel isipiliyoni yindlela entsha ukuze travel. Hambisa phezu, it is classics. Lokhu kwenza indawo nakho ukuthi Umbukiso isiko, imisebenzi, kanye nokuqonda okuyingqayizivele ezindaweni.
Khetha Suppliers Kutibophelela Izikhangibavakashi Esimeme.
Cabanga indawo Abaswele Kwezokuvakasha.
Uma thina obakhathalelayo imvelo futhi sithanda ubuciko ukuhamba, thina kuzokonga, vikela, futhi senze ukuhamba kwethu kusho okuthile ngokuzuzisa okukhulu okuhlangene kweplanethi futhi eco ezokuvakasha. Qala ngokuzinikeza isikhathi lokubhuka uhambo isitimela Londoloza Isitimela, namuhla!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “Indlela Izikhangibavakashi Eco Friendly Ngo 2020?” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-eco-friendly%2F%3Flang%3Dzu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
EcoFriendlyTravel ecotourism europetravel greentransport publictransportation responsibletourism Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi